DAAWO-Muuse Biixi,”Madiidanini Soomaalinimo laakiin arrintaan ayaan ka soo horjeednaa”
October 30, 2020 Xuseen 9
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay Munaasabad ka dhacday Magaalada Hargeysa ayaa sharaxaad ka bixiyay qorshayaasha siyaasadeed ee maamulkiisu kula dhaqmayo Soomaaliya iyo tallaabooyinka hay’adaha qaramada Midoobey.
Muuse Biixi Cabdi, ayaa waxa uu sheegay inaysan diidanayn Soomaalinimo, isla markaana ay qayb ka yihiin Soomaaliweyn, haseyeeshee ay kasoo horjeedaan in lagu jujuubo (Af-qabto) oo dhanka siyaasadda lagaga sameeyey sida uu sheegay.
Madaxweynaha Somaliland ayaa waxa uu intaasi ku daray in wax waliba oo dhaca in aysan meesha ka saareyn Soomaalinimada oo ah mid ka dhaxeysa Shanta qaybood, balse lagu kala duwan yahay dhacdooyinkii dhicay & sada looga falceliyay.
“Marka la yiraahdo dadka Somaliland waxa ay diidan yihiin Soomaalinimo waa Xaashaa kallaah, Soomaalinimo waan ku faanaa, waan ka dhalanay, laf & dhiig ayaan ka nahay, waana jecel nahay in ay wax qabsato oo horumar gaarto, balse waxa xun ayaa ah in la dhaho waxa aad tihiin labo Gobol waana ku qasban tihiin in aad u hoggaansanaataan wax waliba” Sidaasi waxaa yiri Muuse Biixi Cabdi.
Tii Mijaha dhuudhuubneyd ee Soomaali ahayd, tolow yaa u garnaqi doo?!
Ma waxaa qaldanaa raggii Magaalooyin nabdoon oo ka cabanayey Bandow mar mar la saaro soo geliyey, Ciidan aad u hubeeysan oo uu Mingistu dhabarka ka soo taabtay ee Shacab nabdoon iyo Magaalooyinkii aay ku noolaayeen ka dhex dagaalamay, mise Dowladdii meesha joogtay ee ka fal celisay weerarkaa culus ee is difaacday?
Maxaa Dambiile aay ahayd in siijeed lagu toogto meeshan fadhiya oo derejo been ah madaxa loo saay!!!
Kacaankii wuxuu Sameeyey wixii aay sameyn lahayd, Dowlad kasta oo weerar is maqiiq ahi kaga yimaado, dal aay cadaawadi kala dhaxeeyso, ciddii uu doonaba ha soo adeegsadee. Taas oo ah in aay is difaacdo wixii awoodeeda ah, wuuna ku saxnaa 100%.
Waa runtii somalinimadu waa qawmiyad maaha dal la yidhaa Somalia somalinimaduna waxay ka dhaxaysaa 5soomaaliyeed qolona gaar uma le
Waxay ka dhaxeysaa 5 soomaaliyeed
Siyaad Bare AUN. 30 sano baa ka soo wareegtay. Reer isxaaqoow maxaad ka hesheen gooni isu taaga? Sa yaa idin ka hor taagan Ictiraaf?
Waxaad dhahdaan doowladii Siad Bare baan ka xoroownay. Dunida laguma haayo dad 2bo jeer xoroobay. Fanaan kii xamar tagaba iyo koob shaah foam calan ka Somalia loogu sameeyo jail ka dhigaya. 30 yrs kii intaa baa faaiideen.
Soomali weyn, hadaad maqasho.. waaa siiil aad u weyn. waxaa loooma baahan…. Somaliland waxaa mar hore ayay ka ilbaxday.
Soomali wey… waa Siiiil aad u weyn…. waxaa beri hore ayaa laga baxay la nacay… Caruuurta ayaa loogu sheekeeyaa lagu lugooyaaaaa… naga adeer beeenta
Soomali weyn.. hadaad , maqasho waaa . Jabuuti . Kimilka 5aaad , NFD . kenya .. Siilka intaa le,eg sidaa u weyn . anigu dooni maayo.
Sxb adigu iska dhuran oo sidaad doonto iskugu raali geli in wixii uu Afweyne ku kacay aheyd sax. Kuuma diidani oo waa garaadkaaga gaaban. Inta uu kusiiyo ee ku garansiiyona waad iska hadli. 100% baad sheegeysaaye, 1000% maad ku raacsanaatid.
Anigu mida keli ah een adiga iyo asaagaaba uga jawaabayaa waa, waaqiciga maanta jira.
Mujaahidiintii ka tirsanaa jabhadii hubeysneyd ee kala tuurtay Dawladii Siyaad Bare iyo ciidankiisii awooda badnaa ayaa maanta ka talisa Jamhuuriyada Barakeysan ee Somaliland. Dadka Somaliland sidaas ayuu raali kayaga yahay.
Munaasibada hadalkaas uu Madaxweyne Muuse Biixi ka jeediyayna waxa lagu xusayay oo la
abaal marinayay Duuliye Axmed Dheere oo ahaa nin damiirka iyo garaadka adiga illaa iyo
hadadan ku garansiin waayay garansiiyay 32 sanadood horteed. Isagoo weliba qaba amar
kor laga soo siiyay. Naftiisana biime u geliyo, intuu maati gumaadi lahaa. Maanta
waakaas sharafta iyo cisiga ku nool ee la jooga Dadkiisii uu u galay abaalkaas. Idinkuna halkan ayaad ereyo difiica kaga cataabeysaan.
Adiga iyo qowlaysatada kale, shalayna waxaydin aheydeen kuwaani tusnay awoodooda. Maanta
hadaaqiinu cidlo iyo meelaan la’idiin ogeyn ayuu ka durmyayaa. Iksa bood booda. Shalayto waa shalay. Maantana waa maanta. Maanta anaa libinta heysta. Idinkana waxaan idiin deynayaa baroorta. kkkkkkk
Weligiinba xiiqsanaada oo been isku maaweeliya, Dowlad Dunidu laga aqoosanyahay oo Somaliland la yiraahdo arki meeysid, inta aad soo faageeysaa Lafahii Maatadii Ogaadeen ee aad Xasuuqdeen ee aad Jumlad Jumlada u aasteen. Iyo inta Dadka Somalilandnimadu is laheeysiinaya aay yihiin, Iidoor Soocan!
Ninkii iga dambeeya ee Daarood ama Soomaali xalaal ah ahow, Intii aad Iidoor Soomaalinimo u soo dhaweeysan lahayd, Amxaar Gaal ah African nimo u soo dhaweeyso!
That is the best advise from an experience wise man, A. A. Xade.